China Ummeli ocacisa iBT-9803M uMvelisi kunye noMthengisi | BGT
Ukucacisa iAgent BT-9803M
I-BT-9803M Uhlobo oludumileyo lwe-MDBS ye-sorbitol esekwe ekucaciseni iarhente eyeyesizukulwana sesibini.
I-BT-9803M yindlela yokusebenza ephezulu esekwe kwi-sorbitol esekwe (MDBS) yokuCacisa iArhente ngomgangatho ophuculweyo. Isebenza njengeArhente yokuCacisa, ngokwenza inani elikhulu leesherulites ezincinci (<1μm) ngexesha lokupholisa i-polypropylene melt. Ezi spherulites zincinci zikhokelela kwipolypropylene ephucule ukucaca kwaye inciphisa inkungu xa kuthelekiswa ne-polypropylene engacaciswanga. Ifomula yolwakhiwo yale mveliso yamkelwe yi-FDA evumelekileyo kusetyenziswa kunxibelelwano lokutya kwintengiso yehlabathi.
Ummeli wenyukliya luhlobo lwesongezelelo olulungele iiplastiki ezingafakwanga ezibengezelayo ezifana ne-PP kunye ne-PE. Ngokutshintsha isimilo crystallization yentlaka kunye ukukhawulezisa izinga crystallization, unako ukuphumeza injongo ukunciphisa umjikelo yokubumba, ukwandisa ukucaca umphezulu isilungiseleli seglosi, ngqongqo, lobushushu deformation thermal, eqine amandla nefuthe ukumelana neemveliso ezigqityiweyo.
Polymer ilungiswe ngu Ukucacisa uMmeli, Ayigcini kuphela ngeempawu zokuqala zepolymer, kodwa ikwanomlinganiso wexabiso lentsebenzo elingcono kunezinto ezininzi ezinomsebenzi olungileyo wokusebenza kunye noluhlu olubanzi lwesicelo. Sebenzisa iAgent yeNyukliya kwi-PP ayisiyiyo kuphela indawo yeglasi, kodwa iphinde ibuyisele ezinye iipolymers ezinje ngePET, i-HD, iPV, iPC, iPC, njl.njl.
Egqithileyo Ukucacisa iAgent BT-808
Okulandelayo: Ukucacisa iAgent BT-9805